टाइमटेक टीए लाभहरू
4 सजिलो उपस्थिति Clocking तरिका
QF मास्टर अनुप्रयोग
मेरो काम, व्यवस्थित
TimeTec मोबाइल तपाईंको मोबाइलमा उपस्थिति प्रबन्ध गर्दछ र आजको जीवनशैलीको लागि सही फिट।
टाइम टेक मोबाइल पाउनुहोस्
क्लाउड उपस्थिति अन्वेषण गरौं, यो तपाइँको स्वीकार्य छनौट छ!
यहाँ तपाईंको लागि 24/7/365
टाइमटेक सहायता तपाईलाई सहयोग गर्न उपलब्ध छ, 24/7 सबै वर्ष लामो। तपाईं कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ कसरी पत्ता लगाउनुहोस्।
अंग्रेजी • स्पेनिश • इन्डोनेसियाली • मलय • चिनियाँ परम्परागत • चिनियाँ सरलीकृत • थाई • अरबी • वियतनामी • जर्मन • पोर्तुगाली • हिन्दी • जापानी • टर्की र थप ...
ISO / IEC 27001 प्रमाणित
TimeTec विभिन्न स्तरहरू र प्रमाणपत्रहरूको अनुपालनमा छ।
विभिन्न उद्योगहरूको लागि लागू
टाइमटेक टीएको पूर्ण संस्करणको अनुभव लिनुहोस्
days n days दिनको लागि नि: शुल्क!
अब नि: शुल्क परीक्षण पाउनुहोस्!। N | नियुक्ति अनुसूची
समय र उपस्थिति समाधान को अलावा TimeTec TA, टाइमटेक ले तपाईंको कर्मचारी को छुट्टी को प्रबंधन को लागि एक आधुनिक तरीका को लागि टाइमटेक छोडेर पनि प्रदान गर्दछ। TimeTec छोड्नुहोस् मोबाइल एप को माध्यम ले आवेदन, अनुमोदन, छोडने को योजना र अधिक धेरै। टाइमटेक छोडेरको साथ अब म्यानुअल तरिकाको साथ समय बर्बाद गर्न रोक्नुहोस् र आफ्नो क्लाउड-आधारित छोड समाधान सुरु गर्नुहोस्।
टाइमटेक टीए संग साइन अप गर्दा मुफ्त को लागि टाइमटेक प्रोफाइल प्राप्त गर्नुहोस